I-FTA inxusa ama-ejensi wezokuthutha ase-US ukuthi akhuphule amazinga okugoma
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Transportation » I-FTA inxusa ama-ejensi wezokuthutha ase-US ukuthi akhuphule amazinga okugoma
Airlines • Airport • zezindiza • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Ukuhamba ngesikebhe • Izindaba zikaHulumeni • Health News • Izindaba • Abantu • Ukuhamba Kwezitimela • Ukwakha kabusha • Unomthwalo wemfanelo • Ukuphepha • Ezokuvakasha • Transportation • Izindaba Zocingo Lokuhamba • I-USA Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezihlukahlukene
IFederal Transit Administration (FTA) icela abaholi bezokuthutha ukuthi babelane ngalolu lwazi nabasebenzi, futhi benze konke okusemandleni ukukhuthaza ukugoma phakathi kwabasebenzi bakho.
Izinga lokugoma i-COVID-19 liyaqhubeka nokukhuphuka kulo lonke elase-USA.
Ukungabaza umuthi wokugoma nakho kuye kwehla ezweni.
Izinhlangano zezokuthutha zaseMelika zinxuse ukuthi ziqinisekise ukugoma kwabasebenzi bezokuthutha.
Njengoba amazinga okugoma e-COVID-19 aqhubeka nokukhuphuka e-Unites States, i-Federal Transit Administration (FTA) inxusa ama-ejensi ezokuthutha ukuthi aqinisekise ukuthi abasebenzi nemiphakathi yabo banethuba lokuthola lo mgomo.
Ngokusho kweMayo CI-linic kanye Nezikhungo Zokulawula Nokuvimbela Izifo (CDC), ezinyangeni ezimbili ezedlule, abantu abaningi baseMelika sebeqalile ukugonyelwa i-COVID-19. Kwakungaleso sikhathi lapho i-Food and Drug Administration ivume umuthi wokugoma iPfizer-BioNTech COVID-19 ngo-Agasti 23.
Ukungabaza umuthi wokugoma nakho kuye kwehla, ngokusho kwenhlolovo yakamuva ye-Ipsos. Amaphesenti ayi-14 kuphela aseMelika manje athi akunakwenzeka ukuthi agonywe.
I-Federal Transit Administration (FTA) ucela abaholi bezokuthutha ukuthi babelane ngalolu lwazi nabasebenzi, futhi benze konke okusemandleni ukukhuthaza ukugoma phakathi kwabasebenzi bakho. Amanye ama-ejensi anikeze isikhathi esikhokhelwayo ukuthola umuthi wokugoma, imiklomelo yemali, noma amakhadi ezipho ukugqugquzela abasebenzi ukuthi bagonywe.
Ngaphezu kwalokho, kulawo ma-ejensi asebenze kanzima ukukhuthaza ukugoma emphakathini wakho, sethemba ukuthi uzoqhubeka naleyo mizamo, futhi uqale amasha. Abantu abaningi baseMelika bafuna umuthi wokugoma kanye nezokuthutha kungabasiza ukuthi baye ezikhungweni noma balethe amathuba okugoma emiphakathini yabo. Ukusiza ukwabelana ngomyalezo wokugoma emphakathini wakho, ukulinganiselwa kwe-CDC esezingeni lesifunda lokungabaza kokugoma kwe-COVID-19 kungakhomba izindawo ezingaphakathi kwendawo yesevisi yohlelo lwakho lwezokuthutha ezingadinga usizo olwengeziwe ukufinyelela umgomo.
Ukugoma kuyindlela ephumelela kunazo zonke yokuzivikela wena nalabo abakuzungezile ekutholeni i-COVID-19. Ukukhulisa ukuvikelwa kokuhlukahluka kwe-Delta nokuvimbela ukusakazeka kwabanye, i-CDC yeluleka wonke umuntu ukuthi agonywe ngokushesha okukhulu. I-FTA inxusa abasebenzi bezokuthutha ngaphambili - nezinhlangano zezokuthutha abazisebenzelayo - ukuba benze izinhlelo zokuthi bagonywe futhi baqhubeke nokwenza lula ukufinyelela ezindaweni zokugomela amalungu omphakathi angakatholi sibhamu.
I-FTA isekela imizamo yokugoma i-agency yezokuthutha ngokunikeza izibonelelo ngaphansi kwe-American Rescue Plan ukusiza ukukhokhela lezi zindleko futhi ikhuthaze abaholi bezokuthutha ukuthi banikeze ngezinsizakalo ezenza ukuthi umphakathi wabo, kubandakanya nabasebenzi babo, bathole amashothi. Ama-ejensi wezokuthutha afisa ukuthola eminye imininingwane ngokufaneleka kwezimali kufanele avakashele ama-FAQ e-FTA maqondana ne-COVID-19.
I-FTA iphinde ikhuthaze ama-ejensi ezokuthutha ukuthi asebenzise iCDC, uMnyango Wezokuthutha wase-US kanye ne-Occupational Safety and Health Administration (OSHA) i-toolkit ukusiza ukukhulisa ukuzethemba nokuthathwa kwemigomo ye-COVID-19 phakathi kwabasebenzi bezokuthutha.